Ministeran’ny tontolo iainana Manao antsoavo iarovana ny Mikea
Ny Mikea dia foko zanatany amin’ny faritra Atsimon’i Madagasikara ary neken’ny Firenena Mikambana antsoina hoe « Peuple Autochtone », hoy ny fampahafantarana fohy avy amin’ny ministeran’ny tontolo iainana sy fandrosoana maharitra.
Analakely Nihotsaka ilay tranobe, olona 5 no naratra
Nitrangana fihotsahana tao amin’ny tranobe iray fampiasan’ny Minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina tetsy amin’ny Arcade Analakely omaly alakamisy 29 oktobra 2020,
Asa fanarenana JIRAMA Fantson-drano tranainy 5,2 km no efa voasolo
Anisan’ny paikady hanalefahana ny olan’ny famatsian-drano eto Antananarivo sy ny manodidina ny fanoloana ireo fantsona tranainy sy manary rano.
Fisolokiana etsy sy eroa Izay taitaitra dia roboka, ny mailo tsy tratra
Olona maro no nitaraina tany Toamasina fa hoe voasoloky.Manodidina ny 85 tapitrisa ariary raha natambatambatra ny vola efa lasan’ilay mpisoloky ;
Derasolo monina eny Morarano Tsy hita hatramin’izao ilay olona nandona azy
Lehilahy lehibe manodidina ny 60 taona eo ho eo antsoina hoe : Derasolo no voadonan’ny moto ny Alarobia hariva teo ka naterin’ilay nandona azy teny amin’ny hôpitaly.
Efa sesilany ny fitarainana ataon` ireo mpanjifa amin`izao. Nitondra fanazavana ny filohan` ny fikambanana mpiaro ny zon` ny mpanjifa (RNDC), Rabetsara Lita, amin` ny maha mpikambana azy amin` ny filankevim-pitantanana eo anivon` ny JIRAMA. “Nampanantena ny fitondram-panjakana fa azon` ny mpanjifa aloa tsikelikely mandritra ny folo volana ny faktiora tsy voaloa noho ny olana ara-bola vokatry ny krizy ara-pahasalamana. Marihana anefa fa tsy iharan` izay fanapahana izay kosa ireo nanao taratasy fifanarahana teny anivon` ny JIRAMA. Ireo tsy nanao izany kosa dia rariny raha tonga hatrany amin`ny fanapahana”. Notsipihany manokana fa ny ankamaroan` ireo nitaraina ireo dia ireo tsy nanao ilay taratasy fifanarahana teny amin` ity orinasam-panjakana ity.